thola i-inshuwalense yomndeni and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha - Gary Bailey
Tag: thola i-inshuwalense yomndeni and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha
Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha Pretoria
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha ku Pretoria kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Izingcaphuno Zomshuwalense Wesikhashana umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Ukucaphuna Komshwalense Wemoto kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha ku Pretoria ?
Umshuwalense wezimoto nge-SR22 noma u-FR44 ukuthunyelwa kuyadingeka emazweni amaningi abashayeli be-DWI noma i-DUI. Lolu hlobo lwenqubomgomo yomshuwalense wemoto lulungele ukuhlangabezana nokukhishwa kanye nezinye izidingo eziqondene nombuso ngamunye. I-SR22 ne-FR44 ngamagama amafomu asetshenziselwa ukubhala phansi futhi athumele (ifayela) ubufakazi bokulandela umshwalense. Lokhu ngokuvamile kuyisinyathelo sokugcina ngaphambi kokuba abashayeli abanecala bavuselele ilayisense yabo. Le nqubo ifana nomaphi lapho kukhona ukungezwani okuhlukile emazweni ambalwa.
Isinye isishayamthetho sesifunda sinquma izidingo, futhi uMnyango wezimoto eziqondene nawo uqondisa inqubo. Ngo-2007 no-2008 iFlorida neVirginia baqala ukwehlukanisa izinkolelo ze-DUI ngokusebenzisa i-Form FR44 kuphela, kuyilapho begcina ifomu le-SR22 kubo bonke abanye abashayeli bezingozi eziphezulu. Inqubomgomo ehambisana ne-FR44 ihlanganisa imingcele engu-$ 300,000 yemingcele eFlorida ngenkathi i-SR22 yayo idinga i-$ 30,000. EVirginia kuyi-$ 100,000 ye-FR44 ne-$ 50,000 ye-SR22. I-Texas yandisa imithwalo yemfanelo yabo yabashayeli be-DWI ngo-2011. Kusukela ngo-1980 abaamaMama ababhekene noDrunk Drivers (MADD) baye baletha lolu daba phambili futhi bathi basabela ngokwenza njalo ukuze banqande ukuphuza nokushayela.
ukujwayela ukuvimbela kuye kwavela ngenxa yomnotho onesizotha ngenxa yokuphoqelela ukusebenza. Abomasipala basekhaya futhi bathi ngemali eyanciphayo bafuna ngamandla abaqhubi ukuba baqoqe izinkokhelo nemali. Izidingo ezengeziwe zokuphatha nokubhala phansi (ukuqinisekiswa), ukuqinisa ukuvinjelwa, cishe kuzoqhubeka yizizwe eziningi. Ukungafani okwamanje okuphakathi kwamanye amazwe amakhulu kubandakanya iKalifornia neFlorida benenkathi yokulandela iminyaka engu-3 neTexas 2. INew York, North Carolina, iDelaware, Kentucky, Minnesota, New Mexico, Oklahoma nasePennsylvania ayidingi ngokuphelele i-FR44 noma i-SR22. Ukuthola izidingo eziqondile lapho uhlala khona kubaluleke kakhulu ekuqinisekisweni kwenqubomgomo yokubuyisela ilayisense. I-Florida neVirginia, yiziqu ezimbili kuphela ezidinga inshuwalense ye-FR44 kubaqhubi babo be-DUI baye bazuza kakhulu kuloluhlelo. Ngenxa yezizathu eziningi ukuthi umshuwalense wemoto ka-FR44 uyinzuzo kubo bonke abantu, kuhlanganise nomnikazi wezinqubomgomo. Zonke zinezibalo ezingu-0.08 ze-blood alcohol njengemikhawulo ejwayelekile yomthetho. Ngokufanayo, umshuwalense we-FR44 we-DUI abashayeli bangaba yisimiso kuzo zonke izifunda ngenxa yokuphumelela kwawo eFlorida naseVirginia.
Izinqubomgomo zomshuwalense wemoto kusuka nomaphi lapho uhlala khona ne-DUI, DWI, FR44 noma i-SR22 yizo zonke okufanayo. Kodwa-ke, umehluko kubalulekile ekutholeni ilayisense yakho iphinde ivuselelwe nokuthi ukhokhela kangakanani. Gcina izidingo ezingqondweni ziguqula njalo abashayeli abanecala. I-agent yomshuwalense ozimele ozimele, onikezwe ilayisense kumbuso wakho, angachaza izidingo ezifanele ezidingekayo nokuthi uzobiza kangakanani. I-ejenti efanayo ingaqala inqubo ngokuqedela, ukubopha, nokuhambisa isicelo kwinkampani yomshuwalense. Ifomu le-SR22 noma le-FR44 livame ukukhiqizwa endaweni yokudayiswa, futhi ithunyelwe ngekhompiyutha njengoba kudingeka eFlorida. Ikhophi ephindwe kabili inganikezwa umfakisicelo futhi ihanjiswe ku-DMV ukuze ivuselele ukuvuselelwa kwelayisense.
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Gary Bailey Yiba Umshuwalense Wemfanelo Ebhizinisini Uhlu
Author garybaileyPosted on March 8, 2019 March 8, 2019 Categories Umshuwalense Wemfanelo Ebhizinisini PretoriaTags abahlinzeki bomshuwalense benkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, abahlinzeki bomshuwalense wezempilo wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, amazinga omshwalense wempilo yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Classic car umshuwalense guide and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Imibhalo yomshuwalense wasekhaya yaseNingizimu Afrika and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, imihlahlandlela yomshuwalense wemoto yakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, imininingwane yomshuwalense wemoto yakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inkampani yomshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Inkampani yomshuwalense yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inkampani yomshwalense wemoto yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inkampani yomshwalense wezempilo yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inkampani yomshwalense yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, inqubomgomo yomshwalense yenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Isaphulelo somshuwalense ekhaya and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izidingo zomshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izincomo zomshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izindleko zomshuwalense wemoto zakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izindleko zomshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izingcaphuno zemishuwalense ekhaya and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izingcaphuno zomshuwalense ekhaya and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izingcaphuno zomshuwalense zomzimba and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinhlelo zomshuwalense wamazinyo ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinhlelo zomshuwalense wezempilo ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinhlobo zomshuwalense ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinkampani zomshuwalense ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinkampani zomshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinkampani zomshuwalense wezempilo and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinsizakalo zomshuwalense ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, izinzuzo zomshwalense wemoto zakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, okuyisisekelo somshuwalense wezimoto zakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, thola i-inshuwalense yomndeni and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, uhlu lwezinkampani zakudala zomshuwalense wemoto and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, uhlu lwezinkampani zomshuwalense ezinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, ukufaneleka komshwalense wemoto zakudala and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, ukuqhathaniswa komshuwalense ekhaya and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umphathi womshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Umshuwalense wemoto engcono kakhulu ochwepheshe abasha and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto izinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto ka-peter d james and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto ochwepheshe and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezokwelapha and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezomthetho and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto webhizinisi and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wemoto yezimoto zebhizinisi and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wenkampani kanye nobungozi and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wezempilo wenkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshuwalense wokuthuthukisa izinkampani and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshwalense wemoto omdala oqinisekisiwe and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, umshwalense wemoto omdala wokulinganisa and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha, Umshwalense wemoto zakudala uchazwe and Izinsizakalo Zomthetho I-cape Idolobha